Hevitra mandalo; resaky ny mpitsimpona akotry: Ady amin’ny piraty | NewsMada
Hevitra mandalo; resaky ny mpitsimpona akotry: Ady amin’ny piraty
Niteraka resabe teto an-drenivohitra ny fahatrarana ireo mpampiditra hira amin’ny finday sy « clé USB » sy ny fandorana ireo kapila mangirana mirakitra hira sy horonan-tsary piraty. Na mbola maro aza ireo manohy sy manao izany asa izany, raha azo lazaina fa asa, dia efa fandresena amin’ny ampahany ho an’ireo mpamokatra sy mpisehatra amin’io tontolon’ny kanto io izao vokatra azo izao. Mazava hoazy koa anefa fa misy ireo tsy faly. Tsy iza ireo fa ireo piraty mahita tombony amin’izany sy mivelona amin’ny hatsembohan’ny hafa ary ireo mpiray petsapetsa aminy.
Ady tsy mety vita sy sarotra ahitam-bahaolana efa hatry ny ela ity ady amin’ny piraty ity. Efa natao daholo ny paikady rehetra, manomboka any amin’ny fisorohana ka hatrany amin’ny hetsika famaizana isan-karazany, fa izay voasambotra voasambotra fa ny hafa misosoka ihany. Izay manana bafla sy ampli ary solosaina dia efa kaontin’ny nahita asa. Sady asa mampidi-bola. Raha jerena maimaika dia toa tsy misy olana izany satria izay mahay miketrika ihany no tafavoaka amin’izao fiainana efa mihasarotra izao saingy ny tsara ho fantatra dia tsy nitatatra, tsy nively farihy ireny fa mamantam-bonona fotsiny, manao dinta homan’omby.
Ny hafa no lany mondron-kery, tsy nandry andro, tsy nandry alina, nitady aingam-panahy, nampandefitra ny fiainan-tokantrano, nindram-bola tetsy sy teroa. Natontony tao ny farafahaizany sy ny farafananany fa rehefa avy eo dia tonga ry zalahy. Mandika dia avy eo mivarotra. Rariny loatra raha misendaotra ny mpanakanto. Tsy adala akory ny Ntaolo raha nilaza hoe “Ny sasany ve no mamono ny voay dia ny hafa no hiravaka ny vanginy?”.
Rehefa tratra amin’ny tsy mety atao dia mialokaloka amin’ilay hoe “madinika mba mitady toy ny olon-drehetra” sy ny hoe “ka tsy aleo ve manao izany toy izay hangalatra”, na dia hita fa mangalatra tokoa aza. Asa, hanao ahoana re raha misy olona miditra any an-tranon’izy ireny ka hanokatra ny vilaniny dia hihinana tsy norosoana sy tsy nasaina? Tsy maintsy ho tezitra izy. Izay anefa ilay izy. Raha tsy tianao hatao aminao, aza atao amin’ny hafa. Aleo handeha ny ady. Ady amin’ny piraty io sao misy mandray an-tendrony.